Hariiroo ummatootaa cimaa tokkummaafi ijaarsa biyyaatiif
Hariiroo ummatootaa cimaa tokkummaafi ijaarsa biyyaatiif Featured
Walitti dhufeenyaa ummatootaa naannolee muraasa jidduutti eegalame kun cimee ittifufuu qaba
Nageenyi biyyaa mirkanaa'uu kan danda'uu yommuu ummatni biyyattii tokkummaafi waliigalteedhaan hojjechuu danda'aniifi ijaarsa biyyaarratti hirmaannaa kallattii qabaatan ta'uun beekamaadha.
Itoophiyaanis guddinniifi nageenyi biyyaa hawaasa hinhirmaachifne bu'aa akka hinqabne hubachuun waltajjiileen addaddaa qophaa'anii hawaasnii akka irratti hirmaatu erga taasisuu eegaltee bubbuleera.
Keessumaa haaromsaa asitti konfiransiiwwan nageenyaa naannolee gidduutti adeemsifamaa jiran firii olaanaa akka argamsiisan abdatama. Akka fakkeenyaatti dhiheenya kana konfiransiin nageenyaa naannolee Oromiyaafi Amaaraa gidduutti Baahirdaaritti taasifame galtee guddaa argamsiisuun xumurameera.
Konfiransiin ummataa Sadaasa 9fi 10 bara 2010 ammoo naannolee Amaaraafi Tigraay gidduutti Magaalaa Gondaritti adeemsifames saboonni, sablammoonniifi ummatoonni biyyattii aadaa waldanda'uufi walkabajanii wajjummaan jiraachuu caalaatti akka cimsataniif kallattii fuulduraa kan kaa'eedha.
Hogganaan Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa, Obbo Nigusuu Xilaahuun konfiransicha ilaalchisuun ibsa Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, kaayyoon marii waliinii lammaffaa kun hariiroo saboota Amaaraafi Tigraay daran cimsuu, jijjiramaafi guddina waliinii fiduu, nagaafi jaalalaan jiraachuu jabeessuuf yaadamee qophaa'e.
Bardheengaddaa, ji'a Adoolessaa keessa Maqaleetti koonfiransiin walfakkaatu adeemsifamuusaa yaadachiisanii, kanaanis rakkoo nageenyaa yeroowwan darbanitti naannolee lamaan gidduutti uumame hiikuuf jaarsoliin biyyaa akka gidduu seenan kallattii taa'een hojii olaanaa hojjetamuusaa eeru. Mootummoonni naannolee lamaaniis kuteenyummaa olaanaadhaan ummata hirmaachisuun hojjetaniiru jedhu.
Waltajjii Gondaritti qophaa'erratti, sirna federaalizimii tokkoo ijaaruufi cimsuuf nageenyaafi tokkummaa wabii taasisanii gama deemuutiin abbootiin ga'ee hundumtu maal hojjechuu akka qaban irratti kallattii ifaan taa'uusaas ni addeessu.
Naannoleen lamaan kan waldaangeessuurra darbee walfuudhaniifi walirraa horatanii kan jiraatan waan ta'eef addaddaa baasanii ilaaluun ulfaataa ta'uu eeru. Tokkummaa kana caalaatti cimsuufis hirmaattonni hundi ga'eesaanii akka ba'atan kallattiin taa'eera jedhu.
Naannawa daangaa naannolee lamaanii wajjummaan misoomsuufi hariiroo ummataa daran cimsuurrattis karoorri waliinii qophaa'uusaa kan himan Obbo Nigusuun, hojiin gama kanaan hojjetame maal akka ta'e yeroo yeroodhaan qorachaa deemuuf waliigalamuusaa himu.
Waltajjiin akkanaa qophaa'uun nageenya biyyattii bu'uura cimaarraa dhaabuurra darbee walamantaa naannoleefi ummatootaa daran kan cimsu waan ta'eef yeroo yeroodhaan qophaa'ee rakkoo waliinii waliin furuurratti hojjetamuu akka qabus; konfiransiin ummataa walfakkaataan naannolee biroo waliinis kan ittiffu ta'uu eeruun.
Hogganaan Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Bulciiinsa Mootummaa Naannoo Tigraay, Obbo Waldamikaa'eel Mallas akka jedhaniitti, waltajjiin akkanaa qophaa'uun hariiroo ummatoota naannolee lamaanii cimsuurra darbee dhaloota sirna fedeeraalaa biyyattii hubatu uumuuf meeshaa olaanaa waan ta'eef jalqabbiin kun cimee ittifufuu qaba.
Hirmaannaan ummataa hawaas-dinagdee, siyaasa, aadaafi kanneen biroorratti kallattiidhaan jiraachuun ijaarsa biyyaa keessatti shoora olaanaa akka qabus eeranii, kana caalaatti cimsuufis koreen jaarsolii biyyaatiin hogganamu hundaa'ee hojii keessa galuusaa dubbatu.
Torban kana/This_Week 43225
Guyyaa mara/All_Days 1468005